शरिरमा दाद आउँछ ? यसरी पार्नुस् सफाचट् – Etajakhabar
शरिरमा दाद आउँछ ? यसरी पार्नुस् सफाचट्
दादले कतिसम्म तनाव दिन्छ, भोग्नेलाई थाहा हुन्छ । शरीरका काप परेका भागमा दाद बढी आउँछ । खपिनसक्नु चिलाएपछि कन्याउनै प¥यो । सार्वजनिक ठाउँमा दादकै कारण तनाव व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । समस्या भोगिरहेकाहरू औषधि सेवन गर्दा पनि दाद निको नभएको गुनासो गर्छन् । कोही ठीक भए पनि फेरि दोहोरिएको व्यथा सुनाउँछन् । उसो भए के गर्ने ? छालारोग विशेषज्ञ डा. सबिना भट्टराईले नयाँ पत्रिकालाइ दिएकाे सुझाव हामीले पनि यहाँ प्रस्तुत गरेका छाैंः
किन आउँछ दाद ? धेरै मैलो शरीरको ओसिलोपन भएको ठाउँमा दाद आउँछ । शरीर बढी गुम्सिँदा पसिना आउँछ र बढी आद्रताका कारण शरीरमा ढुसी बन्छ । बढी ओस र तातोपन मिसिँदा नै ढुसी फैलिन्छ । त्यसैले काप परेको स्थानमा बढीजसो दाद देखिन्छ । सुरुमा सिक्काजस्तो गोलो आकारमा दाद देखिन्छ । वातावरणीय प्रदूषण र व्यक्तिगत लापरवाही यसका मुख्य कारक हुन् ।
किन हुँदैन निको ? सिक्काजस्तो फुस्रो दाग सामान्य चिलाउने प्रक्रियाबाट सुरु भएर जटिल घाउ बन्न सक्छ । यो सरुवारोग नै हो । दाद निको नहुने भन्ने हुँदैन । तर, आफ्नै कमीकमजोरीका कारण निको नहुने हो । शारीरिक सफाइमा ख्याल नगर्नु, शरीरलाई ओसिलो बन्नबाट नरोक्नु र उपयुक्त औषधि प्रयोग नगर्नु नै दाद जटिल बन्ने कारण हो । हचुवाको भरमा सामान्य औषधि खाने तथा जथाभावी मलम लगाउने गर्दा समस्या बढी हुन्छ । यस्तो औषधिले दुई–तीन दिन चिलाउन छाडे पनि सधैँका लागि दाद निको हँदैन । अधिकांश पसलेले स्टिरोएड नामको औषधि चलाइदिन्छन् । यो औषधिले त शरीरको रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर बनाएर झनै समस्या निम्त्याउँछ । हचुवाको भरमा लगाइने मलमले घाउलाई झनै बढाइदिन्छ र उपचार नै जटिल बन्छ ।
कसरी पार्ने निको ? दाद निको पार्न वेलैमा छालारोग विशेषज्ञलाई देखाउनुपर्छ । सम्बन्धित चिकित्सकले परीक्षण गरेर दिएको सुझाबअनुसार मात्रै उपचार गर्नुपर्छ । दादको प्रकारअनुसार उपचार फरक हुन्छ । चिकित्सकले भनेको अवधिभर तोकिएको औषधि खाने तथा लगाउने गर्नुपर्छ । दादको औषधि लगाउने तथा खाने अवधि कम्तीमा पनि एक महिनाको हुन्छ । शरीरको जुन सतहसम्म ढुसी हुन्छ, त्यो हट्न कम्तीमा एक महिना लाग्छ । यसको उपचार क्लिनिकल केयर र माइक्रोलोजिकल केयर गरी दुई प्रकारले गर्नुपर्छ । अस्पतालमा चिकित्सकको निगरानीमा गरिने उपचार क्लिनिकल केयर हो । त्यस्तै, चिकित्सकले उपचारपछि घरमै बसेर नियमित औषधि उपचार गर्नु माइक्रोलोजिकल केयर भनिन्छ । बिरामीको क्लिनिकल उपचारपछि चिकित्सकले निश्चित अवधिका लागि औषधि दिएका हुन्छन् । हल्का निको भयो भनेर बीचैमा औषधि छोड्नु हुँदैन । दादको समस्याबाट मुक्ति पाउन कटनका लुगा लगाउनुपर्छ । पसिना शरीरमा ओभाउन दिनु हुँदैन । शरीरमा हावा खेल्ने कपडा लगाउनुपर्छ । शारीरिक सफाइमा ध्यान दिनुपर्छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर २८, २०७३ समय: १५:२५:३९